DAAWO: Kenya & Itoobiya si toos ah ciidamadoodu ma ugu dagaalami doonaan Kismaayo.
KISMAYO(P-TIMES) – Saan-saan colaadeed oo ku wajahan xaaladda Jubbaland, gaar ahaana ay isku hayaan ciidamada dalalka Kenya & Itoobiya, waxaana halisaha ugu waa weyn kamid ah dhaqdhaqaaqyada hadda kasocda magaalada Kismaayo.
Doorashada Jubbaland ayaa is tustay dhinacyada Kenya & Itoobiya, oo isku haya cidda noqonaysa Madaxweynaha maamulkaas, waxaana welwelka ugu badan uu ka dhashay markii ay si toos ah labada dalba u hadleen.
Kenya waxay hadda ciidamadeedu ku jiraan heegankii ugu sareeyey oo ay uga jawaabayaan talaabo kasta oo ka timaada dhinaca Itoobiya, waxayna saldhigyadooda laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ciidan.
HALKAAN KA DAAWO WARARKA JUBBALAND
Labada dhinacba waxay u muuqdaan kuwa ku dagaalami doona xaaladda Kismaayo, waxaana haddii xabad dhacdo welwel weyn laga qabaa waxay wax kasta ku dambeyn doonaan.
Warar hoose oo laga helay dhinacyadu waxay cadeynaysaa in welwel weyn laga qabo arrimaha tagan oo dhan, xili ay sii kordhayaan dhaqdhaqaaq arrimaha taagan.
Subaxnimadii hore ee saaka ciidamada Itoobiya ayay kuwa Jubbaland u diideen in ay ka soo baxaan saldhigooda magaalada Kismaayo, waxayna sheegeen in lagu xadgudbay hanaankooda shaqo, ka dib markii ay is hor istaageen ciidamada Jubbaland.